ओलीले झै निर्वाचनमा झोस्ने गल्ति देउवाले नगरुन् « Bikas Times
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला/आदेश आइसकेपछि मानिसहरुको मुख्य चासो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने कुरामा देखिएको छ ।
सत्ताका लागि आफ्नै गोजीकी राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गरेर संविधानका व्यवस्थाहरुको धज्जी उडाएका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सजिलो भएन ।
ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने चाहना प्रारम्भमा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको थियो । किनभने उनीहरुले चाहे जति सत्ताको लाभ लिन पाइरहेका थिएनन् ।
पछि ओलीलाई नहटाई संविधानको रक्षा र अकाल निर्वाचन टार्न नसकिने भयो । यो विन्दुमा नेपाली कांग्रेस पनि जोडियो । पछिल्लो समय ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुको मुख्य मक्सदहरु थिए–
१. प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका असंवैधानिक र अनैतिक हर्कतहरु रोक्नु ।
२. जनता, मुलुक र राजनीतिले नखोजेको चुनाव टार्नु ।
सर्वोच्चको सोमबारको फैसला पछि अब ओलीको बहिर्गमन निश्चित भएको छ । आउँदो फागनुमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको चार वर्ष पूरा हुन्छ । अर्को मंसिरसम्म चुनाव गराउँदा हुन्छ । अर्थात अब १५ महिनाजति समय शेरबहादुर देउवासँग समय रहनेछ ।
५२, ५८, ६१ र ७४ साल गरी शेरबहादुर देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यसपटक उनी पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । ज्योतिषीको भविष्यवाणी मिलेको ठाने पनि राजनीतिक परिस्थितिले डोहोर्याएको भने पनि देउवा प्रधानमन्त्री त बन्दै छन् । तर के ओलीले गर्न खोजेका अपराधबाट देउवा मुक्त हुन सक्लान् ? अबको १५ महिने कार्यकालमा उनले विश्वासको मत पाइरहन सक्लान् ? वा अबको १५ महिने कार्यकालबाट ‘कांग्रेसको सरकारले सुशासन दिन्छ’ भन्ने सन्देश देउवाका कारण जनतामा प्रवाह हुन सक्ला ? मुख्य प्रश्न यी हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कांग्रेसका लागि कुनै नौलो र ऐतिहाँसिक होइन । स्वयं देउवाका लागि पनि यो खास विषय होइन । प्रधानमन्त्री नै सबै कुरा भइदिएको भए यसअघि चार पटकले देखाइसक्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री बन्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त कुनै ठोस काम गर्नु, नेपाली कांग्रेसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ हो ।
शेरबहादुर देउवा ५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जन्मिएको व्यक्ति अहिले २६ वर्षको भइसकेको छ । तर पनि देशमा प्रधानमन्त्री हुने मानिसहरु फेरिएका छैनन् । यसको अर्थ यो हो कि राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन सकेको छैन । नयाँ सम्भावनाहरुले मौका पाएका छैनन् । चाहे सरकारको हकमा होस् वा दलको हकमा ।
प्रतिपक्षमा रहँदा समेत सभापति देउवाविरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला आदिले प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिपक्षीको रुपमा गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन हुने भन्ने मूल मन्त्रलाई कोटको गोजीमा राखेर सभापति देउवा संवैधानिक अंगहरुको भागबन्डामा ओलीसँग एक भए । अर्कोतिर ‘ओलीको कदम गैरसंवैधानिक छ’ भनेर विरोध पनि गरे ।
प्रतिपक्षको मामिलामा मात्रै होइन, सत्ता पक्ष हुँदा पनि आफ्नो भिजनमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ । विरोध गर्ने हो भने विरोध नै गर्नु पर्छ, लेनदेन होइन । समर्थन गर्ने हो भने समर्थन नै गर्नुपर्छ, घातक छु्द्रता होइन ।
चुनाव हारेर पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । ओलीले नेपाल अस्थीर होस् भन्ने नियत राख्ने विदेशी रिझाउन निर्वाचन चाहेका थिए भन्ने गरिन्छ । कम्तिमा देउवा त्यो बाटोमा नहिडून् । अबको समय कांग्रेसलाई जनप्रिय हुने दिशामा डोहोर्याउन् । निर्वाचनमा छक्का पञ्जा होइन, कांग्रेसका उम्मेदवार भएकै कारण चुनाव जित्ने वातावरण तयार बन्न सकोस् ।
त्यसो हुन सक्यो भने निर्वाचन पछि पनि देउवा वा कांग्रेसका अर्को कोही नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । अहिलेको सुशासनले अर्को पाँच वर्ष कांग्रेसले सुरक्षित गर्न सक्छ । यो मौका देउवाले नगुमाउन् । टिप्पणी
विपिको ‘मेलमिलाप नीति’ र आजको कांग्रेस
काठमाडौं । यतिवेला कांग्रेस महाधिवेशनको गर्मी चौतर्फी छ कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आगामी भदौ १६ देखि